Exclusive पोखरामा फोहोर नबगाउने नालिले मानिस बगाएर ल्याएपछि ! को हुन यी मानिस यस्तो अबस्थामा - Public 24Khabar
Home News Exclusive पोखरामा फोहोर नबगाउने नालिले मानिस बगाएर ल्याएपछि ! को हुन यी...
Exclusive पोखरामा फोहोर नबगाउने नालिले मानिस बगाएर ल्याएपछि ! को हुन यी मानिस यस्तो अबस्थामा
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विघटनको सूचना आउनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकाले त्यसको हिसाबकिताब हुने बताए । ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको अविश्वासको प्रस्ताव संसद्को महासचिवले दर्ता गरेर सभामुखलाई समेत बुझाइसकेको उनले बताए । हस्ताक्षर गर्न घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई छुटेको उनले जनाए । ‘यस अर्थमा हामी ९० जनामा मात्रै सीमित छैनौं, अझ बढ्दै छ,’ उनले भने । सरकारले चालेको कदमको विरोधमा सबै कदम चाल्ने ढंगले अघि बढिरहेको उनले बताए ।
‘अहिले जुन काम भएको छ, जनमत विघटनको विपक्षमा छ । हामीले विभिन्न क्षेत्रसँग परामर्श गरेर सही कदम चाल्दै छौं, कांग्रेस र समाजवादी पार्टीसँग पनि छलफल भयो,’ भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भने, ‘सडक र सर्वोच्च जानेबारेमा छलफल चलाइरहेका छौं । ओलीमा रहेको एकाधिकारवादी चिन्तनले जे भने जे गरे, त्यही सही र सत्य हो भन्ने मान्यताले यो अवस्था आएको हो ।’ ओलीलाई कम्युनिस्ट भन्ने शब्दबाट एलर्जी भएको हुन सक्ने नेपालको आरोप छ । ‘मार्क्सवाद र लेनिनवाद भन्ने उहाँलाई अप्रिय त लाग्न लागेको होइन ? यो कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रियताले उहाँलाई छटपटी त भएको छैन ? भन्ने लाग्छ, कक’ उनले भने, ‘पार्टी कुनै व्यक्तिका लागि बलिदान हुने छैन । आज पार्टीले नै व्यक्तिको बलिदान दिनुपर्ने हो कि जस्तो भयो ।’
अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केपी शर्मा ओलीको सरकारले पार्टीको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘नीति तथा कार्यक्रम तीनवटा आयो । त्यो पनि पार्टीको सिद्धान्तअनुसार छैन । पार्टीमा गुट मात्रै बनाइयो,’ उनले भने, ‘सपार्ने कोसिस गर्‍यौं, मुखमा ताला लगाएर पनि बस्यौं । बैठकमा सच्याउन र सुधार्न कोसिस गर्‍यौं, सकेनौं ।’ संविधानको मर्म र भावनाविपरीत ओलीले कदम चालेको उनले आरोप लगाए । संसद् विघटन गरेर जनविरोधी र संविधानविरोधी काम भएकाले यसको विरोधमा उत्रन उनले आग्रहसमेत गरे ।
जनताको समस्या होइन कि मेरा मान्छेलाई खोइ ? : ओली
बालुवाटारको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले बहानामा सरकारलाई झुलाउने काम भएकाले ताजा जनादेश प्राप्त गर्न नयाँ निर्वाचनमा जानुपरेको बताए । पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकतामा तत्परता नदेखाएका कारण पनि अहिलेको अवस्थामा जानुपरेको उनको आरोप थियो । ‘तीन महिनामा सक्ने भनिएको पार्टी एकतामा पनि प्रचण्डले सिन्को भाँच्न सकेनन् । सरकारको काममा पनि एकपछि अर्को अड्चन ल्याएर काम गर्नै दिएनन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भेलामा सहभागी सांसद निरुदेवी पालले कान्तिपुरलाई बताइन् । ओलीले पार्टीभित्रैबाट भएको असहयोग र सरकारले गरेका राम्रा कामलाई लिएर जनतामाझ जान भेलामा सहभागी सांसदलाई आग्रह गरेको पालले जानकारी दिइन् ।
उनले सरकार गठन भएको केही समयदेखि नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने हरेक कदममा व्यक्तिगत स्वार्थ तेर्स्याएर पाइला छेक्ने प्रयास भएको बताए । ‘एकतापछि पार्टीको सचिवालयका ७५ वटा बैठक भए, कुनैमा पनि देश, जनतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उहाँहरू कहिल्यै राजी हुनुभएन, मेरा मान्छेलाई खोइ, मलाई खोइ, उधारो होइन, हाताहाती चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूको स्वार्थ पूर्तिले घेरिनुपर्‍यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जस्तोसुकै दुष्प्रचारको सहारा लिए पनि जनताले यो कुरा बुझेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर चुनावी तयारी गर्न निर्देशन दिए । ‘तपाईंहरू अब निर्वाचन क्षेत्र जानुहोस्, हामीले गरेका अभूतपूर्व कामहरूलाई रोक्न भएका षड्यन्त्रबारे जनतालाई बुझाउनुहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कसले काम गर्‍यो, कसले काम गर्न अवरोध गरेर षड्यन्त्र तिकडम मात्र गर्‍यो, जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।’
त्यस्तै भेलालाई सम्बोधन गर्दै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले ओलीको नेतृत्वमा अब उदाहरणीय विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने बताएका थिए । भेलालाई पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि सम्बोधन गरेका थिए । सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको भेलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सांसदहरू रघुवीर महासेठ, कृष्णप्रसाद दाहाललगायत भने अनुपस्थित थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भेलामा सहभागी भएका छैनन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर तामाङ, यज्ञबहादुर बोगटी, बिमला विक र छक्कबहादुर लामा पनि ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
Previous articleभर्खरै नेपालि सेनालाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो निदेशन | चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख बालुवाटारमा
Next articleसंसद् विघटनपछि पूर्वराजाको चेता”वनी: अब जनताले बाँकी राख्ने छैनन् ! विप्लव रि’सले आगो, कसैलाई नछो’ड्ने (जनचेतनाका लागि सेयर गराै)